နိဒါန်း - ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်း - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏အန္တရာယ်များနှင့်အန္တရာယ်များ (၂၀၂၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌လောင်းထားခြင်း
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာ - ကလေးများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်လူရွယ်များအပေါ်၎င်း၏သက်ရောက်မှုများအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှု
Alessandra Lemma , BSc ။ , MA, MSt (Oxon), MPil (Cantab), DClinPsych
စာမျက်နှာများ 118-130 | အွန်လိုင်း Published: 01 ဧပြီ 2021
ဤနိဒါန်းသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်လူငယ်များအပေါ်ဆက်ဆံရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာသုတေသနကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသည်။ ငါအင်တာနက်မတိုင်မီနှင့်အွန်လိုင်းအပြာစာပေများအကြားခြားနားချက်သည်မည်သည့်အတိုင်းအတာနှင့်မျှမတူပါ။ ငါဆိုသည်မှာ၎င်းသည်အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်သတင်းအချက်အလက်သည်လိင်မှုဆိုင်ရာဆန္ဒများကိုအလျင်အမြန်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုထင်ဟပ်စေသောစွမ်းရည်ကိုအားဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့်လူငယ်များ၏လိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အသက်ကြီးလာခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးမှာရှုထောင့်၏အခွင့်အရေးကိုရရှိစေသည်။ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်သက်တမ်းကျော်လူငယ်များနှင့်ကျွန်ုပ်၏လက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်သောအခါသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုကိုသတိပြုမိသည်။ ပထမ ဦး စွာခန္ဓာကိုယ်ကပို။ ပို။ ဝေးကွာသောနေရာဖြစ်လာသည်နှင့်၎င်း၏ပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းကျယ်ပြန့်ပြုပြင်မွမ်းမံနာကျင်ပြည်တွင်းရေးအဘိဥာဏ်ပြည်နယ်မှသိသာဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်စဉ် (ဆိုလိုသည်မှာaတည်ငြိမ် လိင်နှင့်ကျားမရေးရာလက္ခဏာများမခွဲခြားဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုသည်) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုအကောင်းဆုံးအခြေအနေ၌ပင်အမြဲတမ်းအသိအမှတ်ပြုထားခြင်းထက် ပိုမို၍ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများကိုပြင်ပအချက်နှစ်ချက်ကအထောက်အကူပြုပုံရသည် - ခေတ်သစ်နည်းပညာအမျိုးမျိုးကိုအိမ်မွေးမြူခြင်းနှင့်ပေးထားသောကိုယ်ခန္ဓာ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသောဆေးဝါးကုသမှုများပိုမိုရရှိခြင်း - ကျွန်ုပ်သည်ဤနေရာတွင်သာဖော်ပြပါမည်။
နည်းပညာတိုးတက်မှု၏လျင်မြန်သောအရှိန်အဟုန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာနှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲရန်စိတ်၏စွမ်းရည်ထက်များစွာသာလွန်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မတိုင်မီဆန်းသစ်တီထွင်မှုခေတ်မှစိတ်ပညာရှင်များအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွေ့အကြုံ၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောအရာတစ်ခုခုကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်မတိုင်မီကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံသည်အထောက်အကူပြုသောရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်မဟုတ်သောကမ္ဘာကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသောနောက်ဆုံးလူမျိုးဆက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီမျိုးဆက်ဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာရောအော့ဖ်လိုင်းမှာပါကြီးထွားလာနေတယ်။သဘာဝ"(Floridi 2018, 1) ။ ကွန်ယက်ယဉ်ကျေးမှု၏အမြဲတမ်းလက္ခဏာသစ်တစ်ခုမှာဆက်သွယ်ရေးကိုဖျန်ဖြေပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်ယခုအခါလူငယ်များ၏နေ့စဉ်ဘဝ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၏နေရာအနှံ့ ကို virtual နေရာများသည်ဆယ်ကျော်သက်များသည်သူတို့၏လိင်နှင့်ကျားမရေးရာလက္ခဏာများကိုစေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးသည့်အထူးသဖြင့်လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအိမ်တွင်းသုံးခြင်းဖြင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးသောလက်ရှိအခြေအနေဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ယနေ့ခေတ်တွင်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်လိင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်ယခင်က“ ဘဝ၏ဖြစ်ရပ်မှန်များ” (ဥပမာကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ယင်း၏ကန့်သတ်ချက်များ) အဖြစ်လက်ခံခြင်းကိုယခုအခါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခြယ်လှယ်မှုများ၏တိုးမြှင့်လာနိုင်သည်။ လိင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုယ်နှိုက်သည်နည်းပညာဆိုင်ရာအရပြုမူဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်မျိုးဆက်၏လိင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနားလည်ရန်လိုသည်ဆိုပါကဤနည်းပညာပြောင်းလဲမှုများသည်လိင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှုအသစ်လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်သီအိုရီအရနှင့်ဆေးခန်းသည်အရေးကြီးသည်။
အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ၏အခြားရှုထောင့်များနည်းတူလိင်ဆိုင်ရာရာသီဥတုသစ်သည်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေသည်။ အကောင်းဆုံးမှာအင်တာနက်သည်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်မှုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အသေးစိတ်ဖော်ထုတ်ရန်အတွက်အရေးပါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် (Galatzer-Levy) 2012; Shapiro 2008) များစွာသောသူများအတွက်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေမပေါ်မီကပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုအချို့ရှိသည်။ သို့သော် အွန်လိုင်း ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုရန်အတွက်အလတ်စားဂရုတစိုက်လေ့လာရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်အထူးအာရုံစိုက်မည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားသောနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများသည်အလွန်ပင်ဆိုးရွားလှသည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်နည်းပညာအရဖျန်ဖြေထားသည့်လိင်မှုအတွေ့အကြုံသည်လူငယ်များအတွင်းလိင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွင်ကြားနေသည်ကိုမလိုက်နာပါ။
ဤပြpornနာ၏အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေကဏ္ to ၏နိဒါန်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ၏လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်လူငယ်များအတွင်းဆက်ဆံရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာသုတေသနအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ငါအင်တာနက်မတိုင်မီနှင့်အွန်လိုင်းအပြာစာပေများအကြားခြားနားချက်သည်မည်သည့်အတိုင်းအတာနှင့်မျှမတူပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အွန်လိုင်းအလတ်စားဟာသိသာထင်ရှားသည့်သိသာထင်ရှားသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်လိင်ဆန္ဒကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထင်ဟပ်မှုကင်းမဲ့စွာဖြည့်ဆည်းပေးသော virtual space ကိုပေးခြင်းအားဖြင့်လူငယ်များ၏လိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲစေသောကြောင့်၊ အခြားအန္တရာယ်များနှင့်ခ) အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသတိထားရမည့်အန္တရာယ်များကိုအကဲဖြတ်ရန်။ ဒီအန္တရာယ်တွေဟာအထူးသဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်မျိုးဆက်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနဲ့ပုံသွင်းဖို့ပိုများပါတယ်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုတိုက်ရိုက်စားသုံးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များကိုအသိပေးသည့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှတစ်ဆင့်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
လူအများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်သီးသန့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ နည်းပညာတိုးတက်မှုများက၎င်းကိုချက်ချင်းလက်လှမ်းမီစေသော်လည်း ပို၍ ဝှက်ထားခြင်းကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အင်တာနက်ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်စမတ်ဖုန်းဖြင့်မိတ်ဆက်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်။ ဘယ်တော့မှမမြန်မီ၊ အလွန်လွယ်ကူသောသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်စွာမပါဝင်မီအကြောင်းအရာများ၏အကွာအဝေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ နှင့် (အများအားဖြင့်) အခမဲ့ဖြစ်သည်။ 2018 ခုနှစ်တွင် Pornhub လည်ပတ်မှု ၃၃.၅ ဘီလီယံကိုလက်ခံရရှိသည်။ ၎င်းသည်စုစုပေါင်းနေ့စဉ်ပျမ်းမျှလည်ပတ်မှု ၉၂ သန်းဖြစ်သည်။1 ၁၁ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အတွင်းကလေးများအတွက်ယူကေလေ့လာမှုတစ်ခုအရအသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အတွင်းရှိ ၂၈% နှင့် ၁၅ မှ ၁၆ နှစ်ကြား ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည် (Martellozzo et al ။ ) 2016) ။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအတွက်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းကိုယခုအချိန်အထိမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။
ကောင်းကျိုးကိုပံ့ပိုးပေးသောလိင်အကြောင်းအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်ကလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သော်လည်းလွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်လူငယ်များအတွက်လိင်ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင်လူမှုရေးကိုလိုလားတောင့်တသောသဘာဝကိုပါအားနည်းစေကြောင်းဖော်ပြသည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမပြန့်ပွားမီ၊2 ပျမ်းမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) နဲ့လိင်အလိုဆန္ဒအနိမ့်အမြင့်က ၂% မှ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိခန့်မှန်းထားသည်။ ၁၉၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအရ ၃၀ နှစ်အောက်အမျိုးသား ၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် Erectile dysfunctions (Kinsey, Pomeroy နှင့် Martin) တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် 1948) ။ ၁၉၇၂ တွင် ၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့သည် (Laumann, Paik နှင့် Rosen) 1999) ။ ယနေ့ခေတ်နှုန်းထားများသည် ၃၀% မှ ၄၀% ကြားတွင်ရှိသည်။ မကြာသေးမီကသုတေသနပြုချက်အရသိသိသာသာတိုးပွားလာခြင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအစီရင်ခံစာများတွင်အသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသားများ၊ ၃၀% မှ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းကြားတွင် (Park et al ။ ) ။ 2016) ။ အသက် ၂၅ နှစ်အောက်လူငယ်လူငယ်များနှင့် ၁၈ နှစ်အောက်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများသည်ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများပိုမိုများပြားလာရန် ဦး တည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုတသမတ်တည်းဖော်ပြသည် (O'Sullivan) 2014a, 2014b) ။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအတွက်ရည်ညွှန်းမှုများမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်သက်သေပြသည်။3 အသက် ၁၉ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များသည်ယူကေတွင်အမျိုးသားကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှ ၂၀၁၅-၂၀၁၈ အတွင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာကုသမှုအတွက်သုံးဆတိုးမြှင့်ခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။4
ဤပြproblemsနာများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုကျော်လွန်ပြီးလေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ အော်ဂဇင်ပြုခြင်းအခက်အခဲ (Carvalheira, Træenနှင့် Stulhofer) အကြားဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီ 2015; ဝေရီနဲ့ဘီလီယက်စ် 2016) နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး (Pizzol, Bertoldo နှင့် Foresta) နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုနှစ်သက်ခြင်း 2016; Sun et al ။ 2015) ။ ဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ဟုမဆိုနိုင်သော်လည်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားရပ်တန့်ခြင်းသည်ကျန်းမာသောလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တွင်အငြင်းပွားမှုများအတွက်နောက်ထပ်အထောက်အပံ့များရရှိနိုင်သည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများသည်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများတွင်အရေးကြီးသောကဏ္playsမှပါဝင်သည် (Park et al ။ 2016).
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကိုပိုမိုငယ်ရွယ်သောအရွယ်၌လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ မိတ်ဖက်များနှင့်ကျပန်းလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (Livingstone နှင့် Smith) တို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် 2014) ။ သို့သျောလညျး, ပိုမိုတိုးပွားလာ, အနှစ်တစ်ထောင်အကြားခြုံငုံလမ်းကြောင်းသစ်ရှိခြင်းဆီသို့သောကြီးထွားလာစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါသည် နည်းသော လိင် (Twenge, Sherman နှင့်ဝဲလ် 2015)၊ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အကြားရှိလေ့လာမှုတစ်ခုသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုမှထွက်ခွာခြင်းတို့အကြားခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း (Pizzol, Bertoldo နှင့် Foresta) 2016) ။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောခေတ်ရေစီးကြောင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအကြောင်းကိုသာမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းကမ္ဘာတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် longitudinal ပင်ကိုယ်မူလနှင့်အထူးသဖြင့် psychoanalytic သုတေသနလိုအပ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့သောခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်နည်းပညာအလျောက်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီစေနိုင်သောရွေးချယ်မှုသည်အလွန်နည်းပါးသောဆက်ဆံရေးနှင့်ပိုမိုဝေးလံသောဝေးလံခေါင်ဖျားသောလိင်ဆက်ဆံမှုများသို့အလွယ်တကူကျရောက်စေသောလမ်းကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုနေတာဖြစ်၏ အကယ်၍ နည်းပညာသည်အခြားအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုကျော်လွှားနိုင်ပါက၎င်းသည်အထူးသဖြင့်သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လိင်နှင့်ရုန်းကန်နေရသည့်လူငယ်များအတွက်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ဖြတ်လမ်းများကိုပေးသည်။
အခြားသုတေသနများအနေဖြင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဒီအလှကုန်ပစ္စည်းတောင်းဆိုမှုနှစ်ခုလုံးဟာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများရရှိမှုနှင့်အတူတကွပုံရသည် (Gambotto-Burke) 2019) ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်မိန်းကလေးငယ်များတွင် labiaplasty ကိုတောင်းဆိုခြင်းသည် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်း ၈၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။ 2016) ။ ယောက်ျားလေးများတွင်လည်းသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ အပျက်သဘောဆောင်သောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ယောက်ျား၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသရုပ်ဆောင်သူများ (ခန္ဓာကိုယ်စံနမူနာများ) (လုံးဝြဖစ်သည်) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည် (Vandenbosch နှင့် Eggermont) 2012, 2013).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုလည်းမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အလားတူအခြေခံယန္တရားများကိုမျှဝေထားသောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုတိုးပွားလာသည့်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည် (ဥပမာ Love et al ။ 2015) ။ စွဲလမ်းစေသောအသုံးပြုမှုပြonlineနာကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်၎င်း၏အင်တာနက်မတိုင်မီပုံစံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတိကျသောအန္တရာယ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ လေ့လာမှုအတော်များများကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏအသုံးပြုသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်အသစ်များကိုထပ်မံရှာဖွေရန်သူတို့၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများကွာခြားမှုရှိသည်ကိုပြသခဲ့သည် ဤသည်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလေ့ကျင့်ခြင်းမှကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပုံရိပ်များကိုဖြစ်ပေါ်လာရန်နားလည်သည် (Brand et al ။ 2016; Cordonnier 2006; Meerkerk, ဗန်ဒင် Eijnden နှင့် Garretsen 2006) ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုအွန်လိုင်းအခြေအနေနှင့်ဆက်စပ်သောအရေးပေါ်အခြေအနေများကပိုမိုကျယ်ပြန့်စေနိုင်သည် (Wood ကိုကြည့်ပါ) 2011; သစ်သား 2013ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအနေဖြင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏ပြသနာများအတွက်အမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်စွဲလမ်းမှုဖြစ်နိုင်ချေကိုကျွန်ုပ်တို့နောက်ပိုင်းတွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမည်။
သုတေသနမှလည်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်နှုတ်ဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုများတိုးပွားလာခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုလည်းအကြံပြုထားသည်။ အထူးသဖြင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၊ ပိုမို၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စားသုံးသူသည်ပိုမိုပြင်းထန်သောသဘောထားများထားရှိခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများကိုပိုမိုကန့်ကွက်ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေများကြောင်းဖော်ပြရန်အထောက်အထားများရှိသည်။ (Hald, Malamuth နှင့် Yuen) 2010) ။ နှစ်ရှည်လများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအပြန်အလှန်တွေ့ရှိချက်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်သည် (Ybarra, Mitchell နှင့် Korchmaros) 2011) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်မှု၊ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောကျား၊ မစိတ်သဘောထားများသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့်သိသိသာသာဆက်နွယ်နေသည်။ (စတန်လီ et al ။ ) 2018a, 2018b; Ybarra၊ Mitchell နှင့် Korchmaros 2011) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းများကိုကျင့်သုံးသောမိန်းကလေးငယ်များသည်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ဆိုင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအားထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့ထက်သိသိသာသာပိုမိုများပြားလာသည်ဟုအစီရင်ခံတင်ပြကြသည် (Kjellgren et al ။ ) 2011).
အကြမ်းမဖက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်လျှင်ပင်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအကန့်အသတ်ရှိသည့်လူငယ်များသည်လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်မဟုတ်ဘဲ“ အမှန်တကယ်” အဖြစ်ဖော်ပြသည့်လိင်ကိုကြည့်ရှုရန်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုများ (နှင့်သက်သေအထောက်အထားအချို့) ရှိသည်။ အလှည့်အပြောင်းသည်သဘောထားများနှင့်အစစ်အမှန်ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည် (Lim, Carrotte နှင့် Hellard) 2016a, 2016b; Martellozzo et al ။ 2016) နှင့်ဤအရပ်မှအမှန်တကယ်ကြားဆက်ဆံရေးအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှု။
ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု၏လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြသောတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူ၊ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှုအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသောသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်သောလေ့လာမှုများကိုစိတ်ထဲထားရန်အရေးကြီးသည် (Horvath et al ။ ) 2013) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုသည်ဘက်စုံဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးတစ် ဦး ချင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်သတိထားပါ (Malamuth, Hald နှင့် Koss) 2012) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုတိုက်ရိုက်ကျိုးကြောင်းဆက်နွှယ်သောဆက်စပ်မှုဆွဲရန်သတိထားသင့်သော်လည်း၊ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမထိခိုက်စေပါ ပံ့ပိုးမှုများကို လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်လူငယ်များတည်ထောင်သည့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေရန်။
မြန်ဆန်မှု၏အခန်းကဏ္ and နှင့် 'ဆန္ဒဆန္ဒ' အပေါ်သက်ရောက်မှု5
ကျွန်ုပ်သည်အခြားနေရာများတွင် 3D (esire) ကမ္ဘာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောကမ္ဘာကြီးကိုအင်တာနက်မတိုင်မီကကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ခဲ့သည်။Desire "နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်Dနောက်ဆုံးတော့“Dငါတို့လိုချင်သောအရာ (Lemma) 2017) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ“ အလိုဆန္ဒ၏အလုပ်” (ဆိုလိုသည်မှာလိုအင်ဆန္ဒ၏အတွေ့အကြုံအရအကျိုးဆက်ဖြစ်သောသတိနှင့်သတိလစ်မှုမရှိသောစိတ်ပညာအလုပ်) သည်စောင့်ဆိုင်းခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်၎င်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်စိတ်ပျက်ဖွယ်အခြေအနေများအပေါ်တွင်အခြေတည်ခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မျိုးဆက်သည် 2D (esire) ကမ္ဘာတွင်ကြီးထွားနေသည်။ “ Desire” သည်ချက်ချင်း“ Delivery” ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး“ နှောင့်နှေးခြင်း” ၏အတွေ့အကြုံကိုလုံးဝရှောင်ကွင်းသည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသုံးစွဲမှု၏အဓိကလက္ခဏာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းရန်ခုခံသည့်အတွေ့အကြုံကိုဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်များစွာလျော့နည်းစေသည်။ အတွင်းပိုင်းအတားအဆီးများ (ဥပမာအရှက်ကွဲခြင်း) အပြင်ပြင်ပမှဖယ်ရှားခံရခြင်းသို့မဟုတ်ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခြင်းများရှိသည်။ အမြန်နှုန်း (အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်ခြင်း) သည်အလိုဆန္ဒနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြားအကွာအဝေးကိုလျော့နည်းစေသည်။ အားစိုက်ခြင်းနှင့်စောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိ။ ထိရောက်စွာထိရောက်စွာ“ ဆန္ဒရှိမှုသံသရာ၏အတွေ့အကြုံကိုအွန်လိုင်းမှကြားခံဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ကြားဖြတ်ဖြန်ဖြေခဲ့သည်” (Lemma) 2017, 66) ။
“ နှောင့်နှေးခြင်း” ၏ကြားခံ - ကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသည့်အတိုင်းလက်ခံရမည့်အချိန် - သည်နှောင့်နှေးမှုနှင့်ကြုံတွေ့ရသောကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအရေးပါသည် ကိုယ်စားပြုမှု စိတ်၌အလိုဆန္ဒ၏။ နှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်စရာအတွေ့အကြုံနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲအလိုဆန္ဒအရစိတ်တွင်ကိုယ်စားပြုခြင်းကိုလိုချင်သောအရာ၏အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်များကိုခွင့်ပြုမည့် 3D ပုံသဏ္osesာန်ကိုဆုံးရှုံးသည်။
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်အသားဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအလွယ်တကူမြန်ဆန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်း။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင်နည်းပညာကို“ ဖျန်ဖြေသူ” လို့ပြောရင်၊ စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြားရှိမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆက်နွယ်မှုကိုပြတ်ပြတ်သားသားခွဲခြားခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ထင်ဟပ်စေသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်စဉ်၏အသုံးဝင်သောဖျန်ဖြေခြင်းကိုအားနည်းစေသည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောပုံသဏ္ဌာန်မှတဆင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည့်အရာတစ်ခုကိုဖြည့်စွက်ပေးသည့်ကျေနပ်စရာကောင်းသောစက်တစ်ခုဖြင့်ရောယှက်ထားသည်။
အတွေ့အကြုံ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (အလယ်တန်းအမိန့်) ကိုယ်စားပြုမှုသည်အရေးကြီးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည်။ သတိပြုစရာအချက်များကြောင့်မဟုတ်ဘဲ (ပိုမို) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရွေးချယ်မှုကိုထောက်ခံသည့်သိမြင်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်အသိပေးခြင်းကိုမလုပ်ဆောင်မီကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ လိင်မှုနှိုးဆွခြင်းကိုအလွန်အကျွံမူးယစ်စေခြင်းသည်ပြaticနာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စိတ်သည်လိုအပ်ရာကိုလိုချင်သောအရာကိုကိုယ်စားပြုရန်မလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းဆန္ဒသည်သာယာဝပြောမှုအားဆက်လက်တည်မြဲနေမည်လား၊ သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းတွင်လူငယ်သည်အလျင်အမြန်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကို“ တင်ပြ” သည်။ ၎င်းသည်ဒုတိယအချက်အလိုဆန္ဒ၏ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်နိုင်ခြေမှမည်သည့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမဆိုစင်ကြယ်သောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အာရုံသို့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်းကိုအားပေးသည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအန္တရာယ်ရှိသော (မိမိကိုယ်မိမိနှင့် / သို့မဟုတ်အခြား) အပြုအမူအားအွန်လိုင်းပေါ်တွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးပွားလာစေရန်ကြိုးပမ်းနိုင်သည်။ အင်တာနက်ကိုကြိုတင်တူညီသောအတိုင်းအတာတွင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမဂ္ဂဇင်းသို့မဟုတ် VHS ဗီဒီယိုသည်ချက်ချင်းအရှိန်မြှင့်ရန်ခွင့်မပြု ရှာဖွေလျက်ရှိပစ္စည်းထဲမှာ။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သောအရှိန်အဟုန်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်ပမာဏသည်“ တင်ဆက်မှု” ပိုလျှံစွာဖြင့်ကိုယ်စားပြုမှုကိုရှောင်ကွင်းသည်။ လိင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ Freud ၏ (1930) အောင်းနေချိန်အဆင့် (Lemma ။ ) အစားထိုးခဲ့သည် 2017) ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ကျကျန်နေသောကလေးငယ်များကိုတွေ့မြင်နေရပြီး၊ ငါနောက်ကျမယ့်အစားငါရည်ညွှန်းသောအရာကိုရှိပါသည် ဗြဟ္မဏ: အိတ်ဆောင်အသက်အရွယ်ကလေးသည် Oedipal ကလေးကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပြီး Guignard ပြောသကဲ့သို့
လိင်၏မွေးကင်းစကလေးများသည် Modes သာနောက်ပိုင်းတွင်မွေးကင်းစကလေးများမျိုးရိုးဗီဇတစ်ခုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနှိုးဆော်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ oedipal ဇာတ်စင်ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်ထင်ရှားစွာနေဆဲဖြစ်သည်။ (2014, 65)
လေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်အတူ (ဥပမာ Guignard 2014) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအောင်းနေချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးထားခြင်းသည်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်ဟုမထင်တော့ပါ။ သို့သျောလညျး, ငါလိင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပျိုဖော်ဝင်မှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်အသွင်ပြောင်းအပေါ်ယူ။ ဤဆယ်ကျော်သက်အများအပြားအဘို့အပြcrisisနာတစ်ခုအမှတ်အသားကိုကိုယ်စားပြုသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုစတင်သည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမြစ်တွယ်: လူငယ်သည်သူတို့၏ပြောင်းလဲနေသောအပျိုဖော်ဝင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတို့ပုံသဏ္intoာန်နှင့်ပေါင်းစည်းရမည်။ ဒီရှုပ်ထွေးပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဟာယနေ့ခေတ်မှာကွဲပြားခြားနားတဲ့လူမှုရေးအခြေအနေမှာစိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိဖို့၊ အခြားသူများနှင့်ဆက်စပ်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစွမ်းရည်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်စဉ်များကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့လူမှုရေးအခြေအနေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအခြေအနေတွင်လူငယ်တစ် ဦး အတွက်“ ရွေးချယ်ခြင်း” သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုသင့်၊ မသင့်သည်နှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသည့်“ ရွေးချယ်မှု” ဖြစ်သည် -“ vanilla” အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုလိုက်စားခြင်းသည်လူငယ်များအတွက်လုံး ၀ မတူပါ။ လူတစ်ယောက်သည်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုအခန်းများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းခံရသည်။ “ ရွေးချယ်မှု” သည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝပြီးလူငယ်တစ် ဦး သည်သူနှင့်သူမ (နှင့်သူတို့၏လိင်ဆန္ဒ) နှင့်မည်သို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမိတ်ဖက်များနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များရှိသည်။
အဆိုပါ Black ကကြေးမုံ: ဘယ်သူ့ရဲ့ဆန္ဒကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သနည်း
ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်အသားကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်နှင့်ခိုင်မာအောင်မိဘတို့၏ကိန်းဂဏန်းများထက် ကျော်လွန်၍ မှန်ကိုရှာဖွေရန်ကြီးထွားရန်သင့်တော်သည် -
အင်တာနက်ကိုအကြိုဒီကြေးမုံသည်အဓိကအားဖြင့်သက်တူရွယ်တူများနှင့်မီဒီယာများဖြစ်သောတီဗွီ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ စာအုပ်နှင့်ထိပ်တန်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမဂ္ဂဇင်းများမှထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ၂၁ ရာစုတွင်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ဆုံးနှင့်အလွယ်တကူဖြန့်ကျက်ထားသည့်မှန်ကိုမော်နီတာ၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်း၏အအေး၊ တောက်ပသောမျက်နှာပြင်သည် Black Mirror ဖြစ်သည်။ (Lemma 2017, 47)
Black Mirror သည်ယခင်မီဒီယာများနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်ထူးခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ လူငယ်အားလိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုမကြုံစဖူးကျယ်ပြန့်စွာဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခြင်းသာမက၎င်းသည်ဤထင်ဟပ်ပြသမှုသည်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းထက်ကြည့်ရှုသူများသို့ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရုပ်ပုံများနှင့်အာရုံများကို“ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ထဲသို့” တွန်းပို့သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံလူငယ်သည်ထိုရုပ်ပုံများကိုတက်ကြွစွာရှာဖွေခြင်းမရှိသေးသည့်အချိန်တွင်ပင်။ ရှာဖွေခြင်းသည် ပိုမို၍ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြုလုပ်ပါကအွန်လိုင်းမှကြားခံသည်လူငယ်အားလိင်အရလိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပေးသည်။ အွန်လိုင်းအကြားအမြင်များနှင့်ထိတွေ့မှုမတိုင်မီအထိသေချာစွာဖော်ပြရန်မဖြစ်နိုင်သည့်ကျယ်ပြန့်သောလိင်မှုဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုများ -
... အွန်လိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်အကန့်အသတ်မဲ့လုယက်မှုတစ်ခုအားရာနှင့်ချီသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကစိတ်ကိုမူးယစ်စေပြီးလိင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်အလိုဆန္ဒသို့ 'ထိုးနှက်ဖျက်ဆီးခြင်း' နည်းလမ်းကိုဖိတ်ခေါ်သည်။ (Lemma 2017, 48)
Black Mirror သည်နက်ရှိုင်းစွာဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှုရှိပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသောကွန်ကရစ်ပုံရိပ်များနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ချေများကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်ခဲယဉ်းသည် (Laufer) 1976), ယခုလူမှုရေးနည်းပညာ၏အလယ်အလတ်မှတဆင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာသည်အတွင်း၌စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအရာတစ်ခုခုအတွက်အချို့သောအထောက်အထားများကိုပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရမည်။ သို့သော်လူငယ်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများအားနားလည်ရန်ရုန်းကန်နေရသောကြောင့်၎င်းသည်အတိုင်းအတာအထိအနက်ရောင်ကြေးမုံမှထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဆင်သင့်လုပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကးဤကိုယ်ပိုင်အားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်စရာမလိုဘဲပေါင်းစည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာ၏တည်ထောင်ခြင်းအားနည်းစေ။ Galatzer-Levy အဖြစ် (2012) အဆိုပြုထားသည်၊ ဤထုံးစံ၌ဖမ်းဆီးရမိသောရုပ်ပုံများ / စိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်နောက်ဆုံးတွင်မိမိကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်ဟုမခံစားရပါ။ ငါတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအနေဖြင့်မည်သည့်အေဂျင်စီနှင့်မဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများအပေါ်၎င်းတို့အားတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖိအားပေးခံနေရခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်လူငယ်အတွက်နက်ရှိုင်းစွာမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည်ကိုငါပေါင်းထည့်သည်။ Janine ၏ဖြစ်ရပ်ကယင်းကိုကောင်းစွာဖော်ပြသည်။
သူမ၏အစ်မ၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပြီးနောက်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုစတင်ကြည့်ရှုသောအခါသူသည်အသက် ၇ နှစ်အရွယ်ဖြစ်သည်။ သူမအသက် ၁၆ နှစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံချိန်တွင်သူသည်နေ့စဉ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုနေသည်။ သူမသည်တူညီသောအတိုင်းအတာဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ သူမသည်သူမ၏ပုံပန်းသဏ္withာန်နှင့် ပတ်သက်၍ သိသာထင်ရှားသည့်အခက်အခဲများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမအတုခိုးချင်သည်ကိုကြည့်။ သူအလွန်စိတ်အားတက်ကြွစေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန် labiaplasty ကိုလိုချင်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးခဲ့သည် - သူမသည်လိင်တူဆက်ဆံသူလား၊ ရိုးရိုးလိင်မတူသူလားဆိုတာမသေချာမရေရာသည့်အပြင်အခြားအချိန်များတွင်သူမလိင်မုန်းတီးသည်ဟုသူမကစိုးရိမ်ခဲ့သည်။
အလုပ်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ Janine သည်သူမ၏အပျိုဖော်ဝင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူမကိုယ်သူကိုယ်တိုင်နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ရုန်းကန်နေရသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင်သူမရင်သားပေါက်နေသည့်ရင်သားများကို“ ရွံရှာဖွယ်ရာ” အဖြစ်ပြန်အမှတ်ရမိကာရင်ဘတ်အပြားမှမိန်းကလေးများ၏ပုံရိပ်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏အစာကိုကန့်သတ်လာတယ်။
Janine သည်အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်အစ်မ၏သူငယ်ချင်းများမှတစ် ဦး အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သူမသည်သူမအရက်သောက်သောကြောင့်သူမကြိုက်ခဲ့သောပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကြားမှသူမ (သူမထက်အသက်ကြီးသောအသက်) သူကိုဤသူနှင့်“ ချစ်ကြောင်း” ထင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်သူမအတွက်အလွန်နာကျင်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူမနောက်ပိုင်းတွင်ဤစိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ကောင်းသောအစပြုခဲ့သော်လည်း၊ သူတို့သည်အထူးနှောင်ကြိုးတစ်ခုဖန်တီးထားပြီးသူမအားအထီးကျန်မှုနည်းသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူမအသက် ၁၃ နှစ်မှာသူပျောက်သွားသည်။ သူမသည်သူမသည်အခြားသူများထံမှပြန်လည်ဆုတ်ခွာရန်စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းတွင်သူ၏အချိန်ပိုမိုကြာရှည်စွာသုံးစွဲခြင်းစသောအချိန်ဖြစ်သည်။
သူမအွန်လိုင်းရှာဖွေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သဘောသဘာဝအရနှစ်များတစ်လျှောက်အဆက်မပြတ်တိုးပွားလာခဲ့သည်ဟု Janine ကဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကြာမြင့်စွာကြာသောကြောင့်သူမအလျင်အမြန်“ ထိမှန်” သောရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ အတော်လေးကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စရာကောင်းလောက်အောင်သူမနောက်ဆုံးမှာသူမထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုငါနဲ့အတူပြောပြခဲ့တယ်။ သူမသည်သူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများနှင့်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိလေလေအလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သောခံစားမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်သူမ ပို၍ အာရုံစိုက်လေလေ၊ သူမသည်အလေးချိန်ဖြစ်သည်။ သူမသည်ကယ်လိုရီကိုရေတွက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းစသည်တို့ကိုစွဲလန်းလာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အစာစားခြင်းပြwasနာဖြစ်ပြီးသူမ၏မိဘများသည်သူမကိုကုသရန်ရှာဖွေခဲ့သော်လည်းအလုပ်ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသောရေခဲစိုင်၏အစွန်အဖျားဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။
ငါဒီနေ့ခေတ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တခြားလူငယ်တွေလိုပဲ Janine ဟာစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သနားကြင်နာမှုနဲ့လိင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုအပေါ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကိုအပြင်းအထန်ဖော်ပြခဲ့သည် ဒီမှာ preferences ။ နည်းပညာဆိုင်ရာကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်းသည်လူငယ်တစ် ဦး ၏သူမ၏ဆန္ဒနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ စက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုကိုအားနည်းစေပြီးကိုယ်ရေးကိုယ်တာသမိုင်း၊ သတိလစ်ပconflictsိပက္ခများနှင့်လိင်ဆန္ဒများကိုအတူတကွစုစည်းထားခြင်းအားဖြင့် -“ ကုန်ကျစရိတ်ဆိုသည်မှာအတွေ့အကြုံများပြားသွားပြီးကွန်ကရစ်ဖြစ်လာနိုင်သည်” (Lemma 2017, 67) ။
အရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုမှာအွန်လိုင်းအလတ်စားသို့သာအဓိကအားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားသောလူငယ်များကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများမှ ပို၍ လုံခြုံစွာဆုတ်ခွာစေပြီး ပို၍ ပင်အသေးစိတ်ကျသောခံယူချက်များနှင့်ခြားနားသောအရာဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး။ တနည်းကား, ဒီပိုသုတေသနလိုအပ်သည်။ အကြံဥာဏ်ပေးခန်းတွင်ကျွန်ုပ်၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ ဤမေးခွန်းအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဖြေများပေးနိုင်မည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်စိတ်ပညာဗေဒမရှိဟုကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။ သို့သော် (ဖွံ့ဖြိုးမှုလိုငွေပြမှုနှင့် (သို့မဟုတ်) ပconflictsိပက္ခများကြောင့်) အပျိုဖော်ဝင်ခြင်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကြောင့်စိတ်ထဲပေါ်လာသည့်တောင်းဆိုချက်များနှင့်အတူရုန်းကန်နေရသောလူငယ်များအတွက်၊ virtual space သို့ဆုတ်ခွာခြင်းသည်၎င်းတို့အားစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရသောကြောင့်အထူးဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားအကြားနှင့်သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်အကြားရှိ virtual အကွာအဝေးကိုကြားဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်တကယ့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပတ်သက်သောရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ။
per se online media သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ၎င်းအစားကျွန်ုပ်တို့၏ခံယူထားသောသဘာဝနှင့်ဆက်စပ်သောပconflictsိပက္ခများပြcult္ဌာန်းရန်ယဉ်ကျေးမှုအရအားဖြည့်ပြီးအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီနိုင်သောကားတစ်စီးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည်။ ဤအလတ်စားသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌တိကျစွာတည်ရှိသည်ဟုခံစားရသောအခြားတစ်ခြားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအတွေ့အကြုံများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၏ဝန်ဆောင်မှုတွင်“ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း” နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ငါတခြားနေရာ (Lemma ။ ) ဖျောပွထားသကဲ့သို့ 2014), ဒီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကွဲပြားမှုနှင့်သီးခြား၏အဖြစ်မှန်ဖျက်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်လူ့င့်လင်းမြင်သာ၏ထင်ယောင်ထင်မှားကိုမြှင့်တင်ရန်မည်သို့မည်ပုံထိုကဲ့သို့သောဆိုက်ဘာအာကာသရဲ့တိကျတဲ့ features တွေအချို့သော function ကိုအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်စေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောက corporeality ၏ငြင်းပယ်ထောကျပံ့ပေးနိုငျပုံကို။ ပို၍ အခြေခံကျကျပြောရလျှင်ပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပအဖြစ်မှန်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြောင်းလဲရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အစစ်အမှန်ကိုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အတွင်းနှင့်ပြင်ပအဖြစ်မှန်များကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အတွက်လိုအပ်ချက်ကိုရှောင်ကွင်းသည်။ နှင့်ဆက်စပ် ညီတူညီမျှဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲကွာခြင်းထက် (Lemma 2014, 61)
လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာမှာ ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားသော 'အခြား' တစ်ခု၏အမှန်တကယ်ရှိနေခြင်းကြောင့်၎င်း၏ခန့်မှန်းရခက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ အပြာရုပ်ပုံညစ်ညမ်းသည့်နေရာများတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်၏နိယာမတိုက်စားမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ အကြောင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုအဖြစ်မှန်နှင့်ကန့်သတ်ချက်များတွင်ကျောက်ချရပ်နားရန်အခြား“ အစစ်အမှန်” ခန္ဓာကိုယ်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ virtual space သည်အဖြစ်မှန်မှထွက်ခွာခြင်းအားဖြင့်စိတ်၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်စိတ်ကူးယဉ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အခြားတစ်ခုထက်သာလွန်သောကျွမ်းကျင်မှုကိုသာဖန်တီးနိုင်လျှင်ပင်၎င်းသည်ထိုလူငယ်သည်သူနှင့်သူနှင့် / သို့မဟုတ်သူ / သူမရှိအခြားသူများနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်မှုကိုပြောင်းလဲစေပါက၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည် ဘဝ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးလူတစ် ဦး ၌သူသည်အွန်လိုင်းကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသည့်အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချစ်ခင်စုံမက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်သူအားချက်ချင်းပင်ပျော်ရွှင်မှုပေးခဲ့ပြီးသူ၏စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမုန်းတီးခြင်းကဲ့သို့သောအခြားမနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်အခြေအနေများမှလွတ်မြောက်စေခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှောင်ရှားခြင်းသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်မျိုးလုံးတွင်ပြproblemနာရှိသောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်များစွာဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရှိရသည် (Baranowski, Vogl နှင့် Stark 2019) ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာခဏတာ, ငါ့လူနာထိုကဲ့သို့သောဆိုးရွားသောစိတ်ပြည်နယ်၏ထိန်းချုပ်မှုခံစားရတယ်။ သို့သော်သူသည်အွန်လိုင်းတွင်အချိန်ပိုသုံးလေလေသူ၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်သူ၏သွင်ပြင်နှင့်ပတ်သက်သောအမှောင်ထုထဲတွင်ရှိနေသောသူ၏ရည်းစားထံမှသူနှင့် ပို၍ ဝေးကွာသွားသည်။ အွန်လိုင်းလိင်မှုကိစ္စသည်အမြစ်တွယ်နေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်ကာလတို“ ကျွမ်းကျင်မှု” ကိုကုန်သွယ်မှုပြုပြီးသူသည်အရင်းခံပြproblemsနာများမှမိမိကိုယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားစေခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်သည့်အခါလူငယ်တစ် ဦး ဝင်လာသည့်စိတ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ခု၏မအောင်မြင်နိုင်သည့်အခြားအရာတစ်ခုသည်မိမိကိုယ်ကိုလုံးဝထိန်းချုပ်သည်ဟုခံစားမိသည့်“ အခြား” ၏စိတ်ကြိုက်ပုံစံသို့လျှော့ချသည်။ အွန်လိုင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းသည်များပြားလှသောရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားကြည့်ရှုသူအားအလွန်အမင်းရွေးချယ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်နောက်ကွယ်ကအင်အားကြီးမားသောစိတ်အခြေအနေကိုတိုးပွားစေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အမှန်တကယ်တည်ရှိနေသောဆက်ဆံရေးတွင်အခြား“ အခြား” ၏အခြားတစ်ခုမှာ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်များကိုတိုင်းတာရန်လိုအပ်သောကြောင့် (စိတ်ပျက်စရာ) နှောင့်နှေးသည်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူတို့၏ လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည်အချိန်ကုန်ခံပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးစေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒကိုချက်ချင်းကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်လူငယ်အားလူပုဂ္ဂိုလ်အဆက်အသွယ်လောက၏အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောချက်ချင်းလက်ငင်းကာကွယ်ခြင်းကိုလူငယ်အားခွင့်ပြုသည်။
“ အလိုဆန္ဒ၏လုပျငနျး” နှငျ့ဤ (ဥပမာမှီခိုမှု) ဖြစ်ပေါ်စေသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာအလွယ်တကူရရှိခြင်းဖြင့်တိုတောင်းသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုမလိုချင်သူသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်လိုချင်သူအားအမှန်တကယ်စောင့်ဆိုင်းခြင်းအားဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသည်မတူညီသောအလိုဆန္ဒများနှင့်နှိုးဆွမှုပုံစံများ၏ရှုပ်ထွေးမှု၊ သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအားဖြင့်အတားအဆီးဖြစ်စေနိုင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်လာသည့်“ အပြာအပြာအပြာရုပ်ပုံလွှာ” နှင့်အစားထိုးသည်။ အလှည့်တွင်၊ အခြားစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အမြန်နှုန်းသည်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုများကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောအခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်ကိုအားနည်းစေနိုင်သည်။ ဒီအခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်ကို "စိတ်ဆန္ဒစိတ်သဘောထား" လို့ခေါ်ပြီးဒီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါ့မယ်။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်မြန်ဆန်လွယ်ကူပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အွန်လိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရေးကြီးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုက်စားသွားသည် - စိတ် - ၎င်းသည်ကျန်းမာသောလိင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ငါလေ့အသုံးပြုမှုအကြံပြုအပ်ပါသည် အွန်လိုင်း ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်မိမိကိုယ်မိမိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒနှင့်အခြားသူများ၏ဆန္ဒများကိုတုပနိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများအားလေ့ကျင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ဒီဂျစ်တယ်မျိုးဆက်အတွက်လိင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အကြီးမားဆုံးသောခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည် (Lemma) 2020).
ကျန်းမာသောလူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏အရေးပါပုံကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာစာပေများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ စိတ်ရောဂါပါ ၀ င်ခြင်းဆိုသည်မှာလူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူ (Self-mentalizing) ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်အခြားသူတစ် ဦး ၏အပြုအမူ (အခြားစိတ်ဓာတ်) ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြည်နယ်များ (ဥပမာယုံကြည်မှုများ၊ ခံစားချက်များ၊ ဆန္ဒများနှင့်အလိုဆန္ဒများ) မှအသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းပါ ၀ င်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်လူတစ် ဦး ၏လိင်ဆန္ဒကိုမည်မျှပင်ပြင်းထန်စေကာမူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်ထိုနည်းတူခံစားသည်ဟုဆိုလိုခြင်းကလူတစ် ဦး ၏စိတ်ကူးနိုင်စွမ်းကိုအခြေခံသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏တားဆီးထားသောဆန္ဒကိုစီမံရန်လိုအပ်သည်။ စိတ်ရောဂါသည်အိမ်ထောင်ဖက်တစ် ဦး အားလိင်နှင့်မဆက်ဆံလိုသည့်အကြောင်းရင်းကိုရှုမြင်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်စိတ်တူကိုယ်တူဆက်ဆံရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဖော်သည်ပင်ပန်းနေခြင်းသို့မဟုတ်ထိုအချိန်တွင်တစ်ခုခုနှင့်အလုပ်ရှုပ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤဥပမာအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းသည်အလားအလာရှိသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ (ဆိုလိုသည်မှာခံစားခဲ့ရသောငြင်းပယ်မှုကိုပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်မှုကိုတားဆီးပေးသည်) သာမကပိုမို“ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး” နှင့်အဖော်၏ဆန္ဒမရှိခြင်းအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုအန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
စိတ်ရောဂါသည်မိမိကိုယ်ကိုသတိပြုမိခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုစည်းမျဉ်းများချမှတ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြalizingနာများစွာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည် (Bateman and Fonagy) 2019) ။ အကယ်၍ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လူတစ် ဦး ၏လိင်ဆန္ဒနှင့်အခြားအရာများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုအားနည်းစေနိုင်လျှင်၊ ဥပမာအားဖြင့်လူငယ်မှစစ်မှန်သောလိင်အဖြစ်ယူမှတ်သောလိင်စာသားများကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့်၊ လိင်ကြင်ဖော်ဖက်လုပ်လိုသည့်အရာနှင့်လုံးဝမပတ်သက်၊ , ထို့နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးအလားအလာယုတ်လျော့နေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများဖြင့်ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားများကိုအားပေးခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားလူနာများနှင့်အလုပ်လုပ်စဉ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုမျှော်လင့်ချက်အားအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကြည့်ရှုသည့်အားနည်းသောလိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောမျှော်လင့်ချက်များဖြင့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကြည့်ရှုလေ့ရှိသောလိင်ဆက်ဆံဖက်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များအပေါ်ချမှတ်ခြင်းခံရသည်ကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ , လိုက်နာဖို့ဖိအားအောက်မှာခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကသူတို့က“ ယောက်ျားလေးများလိုချင်တယ်” လို့ထင်တဲ့အတွက် - ကျွန်မရဲ့ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးလူနာများထံမှထပ်တလဲလဲတိုင်ကြားချက်။
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည်ဘွဲ့နှင့်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြေအနေနှင့်ဆက်နွယ်မှုများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေ၊ မထောက်ခံသည့်နေရာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနေထိုင်လေလေကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကျိုးကိုထိခိုက်စေသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံ၏ရှုထောင့်များကိုလျစ်လျူရှုရန် ပို၍ ဖြစ်နိုင်လေလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းသည်ပြproblemနာဖြစ်နိုင်ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်မျိုးဆက်အတွက်အထူးအန္တရာယ်များကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
နိဂုံး: ကာကွယ်ခြင်း တိုးတက်ရေး လိင်၏
အထူးသဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်မျိုးဆက်အတွက်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်ဆိုင်ရာစူးစမ်းလိုစိတ်နှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအတွက်အခြေအနေအသစ်ဖြစ်ပြီးလိင်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်ဟုအဆိုပြုခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်။ ဒါက psychoanalytic အကျိုးစီးပွားသာမဟုတ်ပါဘူး။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်ကလေးသူငယ်များ၏လိင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (Graf နှင့် Schweiger) 2017, 39) ။
နည်းပညာဆိုင်ရာဖျန်ဖြေခြင်းသည်ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Psychoanalytic သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်ဤအခြေအနေတွင်အသစ်အတွင်းတင်ခဲ့သည်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်ကလေး၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်မိဘများနှင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အပြစ်ပေးခံရခြင်းမရှိတော့ပါ။ ကလေး၏နည်းပညာနှင့်ဆက်သွယ်မှုသည်သူ၏အတွေ့အကြုံတွင်အလွန်အရေးပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ကလေးဘ ၀ ၏ကိုယ်ထည်သည်၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်နည်းပညာနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာစေရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပထဝီဝင်အနေအထားကိုတိုးချဲ့သောလက်တွေ့ကမ္ဘာ၏အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အန္တရာယ်များကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအတွက်အလွန်တရာလိုအပ်ကြောင်းပြတ်ပြတ်သားသားဖော်ပြသည်။ အသက်စစ်ဆေးခြင်းစနစ်သည်အကောင်အထည်ဖော်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ယခုအချိန်အထိဤအန္တရာယ်များကိုဖြေရှင်းရန်မဟာဗျူဟာများအနေဖြင့်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ခြင်းခံရသည်။ ထို့အပြင်၊ နည်းပညာအသစ်များကြောင့်ပြtheနာပေါ်လာသဖြင့်ဖြေရှင်းနည်းသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြoneနာမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်နည်းပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုတွင်ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိခြင်းကြောင့်နည်းပညာကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာလျှော့ချ။ မရနိုင်သောစွန့်စားမှုများကိုတိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာကိုကန့်သတ်မထားသောဖြေရှင်းချက်များကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ Psychoanalysts များသည်မူဝါဒများ၊ ကြီးမားသောကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအစပျိုးမှုများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အကြံပေးခန်း၏အကန့်အသတ်များကိုကျော်။ စွန့် စား၍ လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါက၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အန္တရာယ်များကိုတားဆီးရန်အတွက်ကလေးသူငယ်များနှင့်လူငယ်များအား“ ထိုးသွင်း” ပေးသောစိတ် - လူမှုရေးဆိုင်ရာကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ 2020) ။ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးသည်ကျွန်ုပ်တို့တုပ်ကွေးမဖြစ်နိုင်ကြောင်းအာမခံနိုင်သကဲ့သို့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏စားသုံးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ဒီဂျစ်တယ်၏အုပ်ချုပ်မှု (Floridi 2018) တစ် ဦး ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ psychoanalysts ကျွန်ုပ်တို့တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ လက်ရှိအငြင်းအခုန်များတွင်ပါဝင်သင့်သည်၊ ထည့်ဝင်သင့်သည့်စိတ်ဓာတ်ရှိသောစံနမူနာရှိသည်။ Floridi လျောက်ပတ်စွာပြောသကဲ့သို့
နည်းပညာရထားကိုဖမ်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာ၎င်းကိုလိုက်ဖမ်းရန်မဟုတ်ဘဲနောက်ဘူတာတွင်ရှိနေရန်ဖြစ်သည်။ (2018, 6)
Alessandra Lemma, BSc ။ , MSt (Oxon), MPil (Cantab), DClinPsych သည်ကလေးများနှင့်မိသားစုများအတွက်အန်နာဖရွိုက်အမျိုးသားစင်တာမှအတိုင်ပင်ခံလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်အပြင်လူငယ်များအတိုင်ပင်ခံနှင့်ကုထုံးဆိုင်ရာပူးတွဲဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်သည်။ အန်းလေ့ကျင့်ခန်း။ သူမသည် psychoanalyst နှင့် British Psychoanalytic Society ၏အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သည်။ သူမသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိသူသည် Tavistock နှင့် Portman NHS Trust တွင် ၁၄ နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးသူမသည် Essex တက္ကသိုလ်နှင့် တွဲဖက်၍ စိတ်ပညာကုသမှုပါမောက္ခဖြစ်သည်။
၂။ ပထမဆုံးဆိုဒ်ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။
၅။ ဤအပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောအယူအဆအချို့ကိုပထမ ဦး ဆုံး Lemma တွင်ဖော်ပြထားသည် (2017).